द्वारा Emma Steel
पढ्ने समय:5मिनेट युरोप जीवन्तको सम्बन्धमा अग्रणी महाद्वीप हो, बस्न योग्य, र रमाईलो भरिएका आधुनिक शहरहरू. त्यहाँ वास्तु आश्चर्यको प्रशस्तता छ, संग्रहालयहरु, र प्रत्येक युरोपेली देशहरूमा रेस्टुरेन्टहरू जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ. नाइट लाइफ र महाद्वीप भर खाद्य दृश्य कुनै पछाडि आउँदैन. The wildlife…
पढ्ने समय: 8 मिनेट रंगीन, विदेशी, र सुविधाहरू र बस्ने ठाउँको असाधारण, तपाईंले यी पाउनुहुनेछ 12 यूरोप मा देख्नको लागि सबैभन्दा अनौठो जनावरहरू. सबैभन्दा गहिरो महासागरहरू बसोबास गर्दै, उच्च आल्प्स, वा हरियो यूरोपीयन वुडल्याण्डमा आराम गर्दै, be sure to be on the lookout for these…